साचै गर्भवती छिन त दिपिका ! – An Online Entertainment News Portal
Homeblogसाचै गर्भवती छिन त दिपिका !
January 27, 2019 Tulasa Karki blog, Bollywood, News 0
केहि समय अगाडी विवाह बन्धनमा बाधिएका बालिउडका चर्चित जोडी दिपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको विवाहको चर्चा लामो समय सम्म चलिरहेको थियो ।
यसै बीच अहिले दिपिका गर्भवती भएको खबरले बलिउडमा निकै तहल्का मचाई रहेक छ भने दीपिका एक कार्यक्रममा बोल्दै सो कुराको खण्डन गरेकी छिन । उनले सो कुरा झूट रहेको र अहिले यी दुईको त्यस्तो कुनै पनि योजन नरहेको बताएकी छिन ।
उनले आमा शब्द आफैमा एक महातोपूर्ण जिम्मवारी हो । सो जिम्मेवारी वहन गर्न अहिले आफू असमर्थ रहको र यस्तो खाल्को जथाभावी हल्लाह नगर्न समेत आग्रह गरेकी छिन ।